ဖွေးဥနုထွက်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………. – Shwe Naung
N N | December 8, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တွေထဲမှာလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မျက်နှာကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
သူမကတော့ ယခုမှာ အထာကျကျလေးလန်းလွန်းတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ ရှေ့ ချပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ” reply ကြာရင်တောင်စိတ်ပူ တတ်တဲ့ ငါ့ကိုမှ ပစ်ထားရက်ပြန်ပီ. “ဆိုပြီး ကြွေလောက်စရာကောင်းတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ လူမှုကွန်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ လှပနေပြီး အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အနီရောင် အဖြူရောင် ဝမ်းဆက် လေးနဲ့ အတွင်း သား ပေါ် လွင် အောင် ဆက်ဆီ ကျလွန်း အောင် ကြော်ငြာ ပုံရိုက်ထား တဲ့ လုလုအောင်…..
သာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့ ပြီး ချစ်သူ ကောင်မလေး ရဲ့ ဘဝမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒတွေထဲက တစ်ခုကို ဖြည့် ဆည်းပေး လိုက်တဲ့ စွမ်းဇာနည်..
ခရမ်းရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..